ယ့ၫၡုၬအီၪက့ၪဆၧမၫလၧၦဖၫရစံၫ ဒဲဆရၫၥီၪ့လိၪလံၬဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့လဖၪ | Radio Veritas Asia
မွဲလါနၫ့တၭ, ၦဖၫရစံၫၥံၪဧ့,နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩနၥံၪမၩဘိၪ့ဖီၫကဘၩ့, ဒဲရူၩ, ဒဲဆၧဒိၭဆၧလၪလမံၩ့လါလါ, ဆံၫပိၩ့နီၪလပိၩ့လီၫ. နၥံၪလ့ၩဖၬဆၧစ့ၩရၫ့, ဒဲယွၩအဆၧအဲၪဆၧကွံၩလီၫ. အယီၩလဖၪနၥံၪဂ့ၩမၩတၭ, အနီၪလဖၪကြၨၭနၥံၪလ့ၩဖၬဘၪဆ့အ့ၬ.
ၦဖၫရစံၫၥံၪဧ့, နၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ.အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪအဲၪဒိၭလးဆၧၫ့နၩ့အဂ့ၩထုၬလၧၥရိၬဖၧၩ့, ဒဲ ဆၧချဲၩ့ဒုၪ့လၧဖၠၫဖၧၩ့လီၫ. နၥံၪဝ့ၫဒၪယီၩနၥံၪဘၪအၡၪ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪလၩ့ဂၬ ၦၥွၪခိၪလဖၪ လၧအလအီၪဖျီၪဘၪတၭ, ၦၡၩလ့ၩဆၧထဲၩ့ဆၧလၧအဖၫ့ခိၪလါနၫ့နီၪၥ့ၪယၫဝ့ၫအ့ၬ.
ၦၥ့ၪလံၬလဂၩချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ, စံၭအဝ့ၫ, ဆရၫဧ့,နစံၭဆၧယီၩနဒုၪ့ဒွ့ၪပၧၩဆ့မၬကၨ. အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ, ၦၥ့ၪလံၬနၥံၪဝ့ၫဒၪဧ့,နၥံၪဘၪအၡၪ့ဆ့လီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧအွံၪဆၧယိၭလၧအဎၧၫ့မၬနီၪ,နၥံၪအီၪက့ၪထၪ့ဝ့ၫလၧ ၦၡၩအလီၩ့တၭ, နၥံၪအနၫ့ဆါဒၪနၥံၪဝ့ၫ, နၥံၪထိၭဘၪလၧ နၥံၪအစူၪနိၩ့ နးဘီၩ့အ့ၬ.